May Nyane: မြသီလာအလွမ်းပြေ(၂၄)
ဆရာမရေ အဲလိုမျိုး ဆီလို အပေါက်ရှာပြီး ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်တတ်တဲ့ သူတွေကို တကယ်မုန်းတယ်။
အပေါ်ယံ အမြင်နဲ့ ကြည့်ပြီး ပြစ်တင်ရှုံချတတ်တဲ့ သူမျိုးဆို ပိုမုန်းဖို့ ကောင်းသေး။ ဆရာမ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို မြင်ကြည့်လို့ ရပါတယ်။
လူ့ဘ၀ဆိုတာ ပြဌာန်းထားပြီးသား စာမျက်နှာတွေနဲ့ စာအုပ်တအုပ်ပဲ ဆိုတာကိုတော့ အပြည့်အ၀ ထောက်ခံတယ် ပြန်ပြင်ချင်ပြီး ပြင်ခွင့်မရတဲ့ စာမျက်နှာတွေ အများကြီးမို့လူကလုပ်တဲ့ စာမျက်နှာဆိုတာကို လုံးးဝမထောက်ခံဘူး
ပြီးတော့ကိုစန်းဦးရဲ့သောကခွက် ၃၀ ..အဲဒါကိုတော့
မနော်လည်းမှတ်စုထဲကူးထားခဲ့တယ်။ ကိုယ် ၃၀ အရွယ်
ဆရာမရေ ဘ၀တွေက မောတယ်နော်။
ဆရာအော်ပီကျယ်ရော ဆရာမရော မမှားပါ။
ဘ၀ဆိုတာပြဌာန်းပြီးသားစာမျက်နှာတွေဆိုတာအမှန်ပါ။ နောက်ဘ၀အတွက်ပြဌာန်းမယ့် စာမျက်နှာတွေအတွက်တော့ဒီဘ၀မှာ လူကိုယ်တိုင်လုပ်ရမှာပါပဲ။
ဘ၀ဆိုတာ ပြဌာန်းပြီးသားစာမျက်နှာတွေ ကိုချည့်စောင့်ထိုင်ဖတ်နေရုံသက်သက်မဟုတ်တဲ့အတွက် အဲဒိ စာမျက်နှာတွေ ကိုလူကလုပ်တယ်ဆိုတာလဲမမှားပါ။
အဲဒိစာမျက်နှာတွေကိုလူက လူချင်တိုင်းလုပ်ဖို့ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးဖို့ အတွက်ကတော့ ကျင်လည်ရရာ ခေတ်စနစ် ၊ လူမှုဝန်းကျင်အဆင့် ၊ အနေအထား အားလုံး နဲ့ လဲဆိုင်မယ်ထင်တာပဲ။
၂၄ ဖတ်အပြီးမှာ Discrimination, Cultural & traditions တွေအကြောင်းစဉ်းစားသွားပါတယ်။
ဇေယျာလင်း ရဲ့ စကားလုံးတွေ အားကောင်းလိုက်တာ..ခပ်စူးစူး နင့်နင့်ကြီး ကို ဖြတ်ဝင်သွားတယ်...
('သူ့ယောက်ျား ဘိန်းစွဲလောက်အောင် သူက ဘာတွေ စိတ်ညစ်အောင် လုပ်လဲမှ မသိတာ' .. 'တပည့်တွေ တရုန်းရုန်းနဲ့...' ဆိုတာမျိုးက စပြီး 'ယောက်ျားကို ဂရုမစိုက်ဘဲ လုပ်ချင်တာ လုပ်နေတာကိုး' ဆိုတဲ့ အထိပေါ့။ လွယ်လွယ်ကလေးနဲ့ ပြောခဲ့ကြတာ။
'အဲဒီ တခုလပ် ဆရာမက...'
'ကျောင်းဆရာမ တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့... တဲ့။)
('ကိုယ့်ယောက်ျားကိုတောင် မထိန်းနိုင်တဲ့ မိန်းမ' ဆိုပဲ..။ ယောက်ျားဆိုတာ မိန်းမက ထိန်းမှ ရမယ့် သတ္တ၀ါလား.. စဉ်းစားစရာပါ။)
အဲဒီလို အပြောမျိုးတွေနဲ့တော့ သမီးလည်း ခဏခဏ ငြင်းရဖူးတယ်။ မသိလို့ မေးချင်တာက အဲဒီယောက်ျားဆိုတာတွေက ဦးနှောက်မရှိ၊ အသိဥာဏ်မရှိတဲ့ လူတွေလားလို့ပါ။ မိန်းမဆိုတာမျိုးက အကြံဥာဏ်လေးပေးရုံ၊ ဖြစ်သင့်တာလေး ပြောပြရုံပဲ တတ်နိုင်မှာပေါ့။ ဒါကို လူတွေ ဘာလို့ နားမလည်ကြလဲ အံ့ဩလွန်းလို့။
(ရေကူးသင်လို့ မရ..၊ စက်ဘီးစီး ကားမောင်း သင်လို့မရ..၊
ဒီနေရာမှာ ပြောပြချင်တာက ကျမက စက်ဘီး မစီးတတ်.. နောက်ကတောင်မှ သေချာ စနစ်တကျ လိုက်မထိုင် တတ်)
သမီးနဲ့ တူလွန်းလို့ ဟက်ဟက်ပက်ပက်ကို ရယ်မိတယ်။ စက်ဘီးဆိုရင်လည်း ဖြည်းဖြည်းလေး အရှိန်နဲ့ လှိမ့်နေတုန်း ခုန်မတက်တတ်။ ဆိုင်ကယ်ဆိုလည်း ရှေ့ကလူကို ကိုင်ပြီး တက်ဖို့ အဲဒီလူကို ကိုယ့်ခြေထောက်လောက် မယုံတာနဲ့ပဲ ခြေဖျားထောက်ထောက်ပြီး သေချာ တက်ရလွန်းလို့ ခြေထောက်တွေလည်း အကြောမြတ်ပဲ။ နောက်ဆုံးတရားခံက အသားနာမှာ အရမ်း ကြောက်တတ်လို့ ခုလိုဖြစ်တတ်တာ အန်တီရဲ့။
၂၄ ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။ ကဗျာတွေလည်း ကောင်းသလို၊ ဖတ်ရင်း ရယ်ရ၊ ၀မ်းနည်းရ၊ စိတ်မကောင်းရနဲ့ ခံစားချက်မျိုးစုံကို နင့်နင့်သီးသီးရလိုက်လို့။
ကိုမောင်ရင် ပြောတာကို ငြင်းစရာမရှိလောက်အောင် အပြည့်အ၀ကြီး ထောက်ခံတဲ့အတွက် အန်တီ မေးထားတာကို ဖြေပြီးသလိုတောင် ဖြစ်သေး။:P
အမရေ- ခုမှ ပြန်ရောက်လို့..၂၃ -၂၄ တပြိုင်တည်း မော့ချသွားတယ်။ မူးသွားတာပဲ။
လူ့ဘ၀ဆိုတာ..ပြဌါန်းပြီးသား- ကျောင်းသုံးဖတ်စာအုပ်တအုပ်ပေါ့။ ပြင်ချင်တဲ့သူက..ပြင်ရင်လည်း..ပြောင်းအုံးမှာပဲ။ ကိုယ်တိုင်လဲ..ဖတ်ချင်သလိုသာဖတ်.. သင်ချင်သလိုသာသင်။
အင်း အဲဒီတုန်းက ထောင်ထဲက ကိုသီဟ ရေးလိုက်တဲ့ စာလေးကို နင်က မဖတ်လို့ ငါနဲ့ခက်မာနဲ့ ဖတ်ပြီး မျက်ရည်ကျတာရော မှတ်မိသေးလား။ ၃၃ လမ်းက လေထန်ကုန်းမှာ... သူက ငါ့ကိုညာတာ ငါမုန်းတယ် တဲ့ နင်ပြောခဲ့တာလေ...ဒီ အပိုင်း ၂၄ ကိုတော့ ငါက မျက်ရည်တွေနဲ့ ဖတ်ခဲ့တယ် သူငယ်ချင်း...
ဟုတ်တယ် အန်တီ အန်တီ့ရဲ့ လူ့ဘ၀ဆိုတာ ပြဌာန်းထားပြီးသား စာမျက်နှာတွေနဲ့ စာအုပ်တအုပ်ပဲ ဆိုတာကိုတော့ ထောက်ခံပါတယ်၊ ကိုယ့်ဘ၀မှာ ဘယ်တော့မှ ဒီလိုမဖြစ်စေရဘူးလို့ ဆိုထားတဲ့ အရာတွေက ကိုယ်ဘယ်လောက်ပဲ အားတင်းထားတင်းထား ဖြစ်ချိန်တန်ရင် ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာ လက်တွေ့ကြုံဘူး သူတွေအတွက်တော့ အန်တီ့ ရဲ့ ခံစားချက်ကို လက်ခံကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်၊ လက်မခံချင်တဲ့ လူတွေကလည်း သူတို့ကိုသူတို့ တစ်ခုခု မှားနေပီးလို့ ထင်ပါတယ်၊ အန်တီ့ရဲ့ နှလုံးသားနဲ့ ရင်းပြီးရေးခဲ့တဲ့ စာတွေက သမီးတို့အတွက် တကယ့်ကို စံနမူနာယူစရာပါ၊ လူတိုင်းဟာ ကိုယ့်ခံစားချက်ကို ချရေးဖို့ လွယ်တဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး၊ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အဖြစ်က ကိုယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအ၇ာကို သူများကို စာနဲ့ ရေးသားတင်ပြဖို့ မပြောနဲ့ နုတ်ကနေပြောဖို့တောင် မရဲကြတဲ့ အချိန်မှာ အန်တီ့ရဲ့စာလေးကို ဖတ်လိုက်ရလို့ အမျိုးသမီးတွေ ကိုယ့်ဘ၀ကို ထုတ်ဖော်ပြောတက်လာမယ်လို့ သမီးယုံကြည်မိပါတယ် အန်တီ၊
တအုပ်ပါဆိုတာကိုတော့ လုံးဝ (လုံးဝ)လက်မခံနိုင်ပါဘူး.....
နောက်တခုက ဆရာမမနော်ဟရီ က ကိုအော်ပီကျယ်ကိုဝေဖန်ပုံကလည်းသိပ် မပြေပြစ်လှပါဘူး...ဘာကြောင့်ငြင်းငြင်း
က စာရေးဆရာမတယောက်အနေနဲ့ ဘာသာတရားကို ဒီလောက်ပဲနားလည်လားလို့တွေးစရာဖြစ်စေပါတယ်။
ဗုဒ္ဓ၀ါဒ က ပြဌာန်းခံဝါဒလား...
ကျွန်တော်တို့ဟာ အတိတ်ဘ၀တွေရဲ့ ရောင်ပြန်ဟပ်ချက်သက်သက်ပဲလား
ဒါဆို ခုဘာလို့ ကျွန်တော်တို့ တွေ ဘ၀ကိုအပင်ပန်းခံတည်ဆောက်နေတော့မှာလဲ
နောက်ဆုံးလက်ရှိအာဏာရှင် ကိုလည်း တော်လှန်နေစရ့ာမလိုတော့ဘူးပေါ့
လင်း.. မနော်..ကမောင်ရင်.. s0wha1... ကေ.. konhonsa.. lawinoon... တကယ်တော့ ကျမပြောပြီးသားပါ... ဘသူမှ အနိုင်မရတဲ့အငြင်းဆိုတာကို.. ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကမောင်ရင်ပြောသလို ၂ခုလုံးက မှန်နေလို့ပါပဲ..။ အတိတ်ကံက ပြဌာန်းခဲ့တဲ့ စာမျက်နှာတွေကို ကိုယ်က တတ်နိုင်သလောက် ပြုပြင်တည်ဆောက် ဖန်တီးရ မှာပါ..။ ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီအတွက် လုပ်နိုင်ခွင့်ဆိုတာကလည်း အခြေနေတွေ လိုတယ် ဆိုတာ.. အဲဒါကလည်း ကံနဲ့ဆိုင်နေသလိုပါပဲ..။ တခုပဲ စာမျက်နှာတွေထဲမှာ တတ်နိုင်သလောက် တော့ ကြိုးစားတည်ဆောက်ရမှာပါ။
ရွာသားလေးရေ.. ဒါကြောင့်ပဲ အမတို့ခေတ် တလျှောက် အင်မတန် ပင်ပန်းကြရတယ်လို့ ပြောရတာပါပဲ။
ဒေါ်ခင်မင်းဇော်..မှတ်မိတာပေါ့ သူငယ်ချင်းရယ် တခါတလေကျတော့လည်း ကိုယ်ကလည်း သိပ်တင်းမာ နာကျင်လွန်းခဲ့သလား လို့ စဉ်းစားမိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီအချိန်တုန်းကတော့ ကိုယ့်ရဲ့မာနနဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ဘာနဲ့မှ မလဲနိုင်ခဲ့တာ.. မတတ်နိုင်ပါဘူး။
Yellow Breezeကိုတော့ ပြောပြချင်ပါတယ်။ ကျမက စာရေးဆရာမမို့ ကျောင်းဆရာမမို့ လေးစားတာနဲ့ ကိုယ့်အယူအဆကို ပြောတာဟာ ဘာမှ မဆိုင်ပါဘူးရှင်။ အဲဒါကိုက ကျမတို့ ဗမာတွေ လွဲနေတာပါ။ ဗုဒ္ဓတရားနဲ့လည်း လွဲနေပါတယ်။ ဗုဒ္ဓကတောင် ငါပြောတာတောင် စဉ်းစားပြီးမှ လက်ခံပါလို့ ကာလာမသုတ္တံမှာ ပြောခဲ့တာ ပါ။(အတိုချုပ်ပြောပြတာပါ)။ ဆိုတော့ အားလုံးစဉ်းစားဖို့သာပါပဲ။ ပီ နဲ့ ကျမ ငြင်းတာ လည်း အဲလို..ပါပဲ။ ကျမတို့စာပေလောကသား တွေက မောင်နှမတွေလို အမြဲ ငြင်းကြခုန်ကြ ဆွေးနွေးကြပါ။ မနော်က အဲဒါကြောင့် ပြောတာ.. ကျမတို့ချင်းသိတဲ့ လေသံပါပဲ။ မနော်ပြောတာကို ကျမ နားလည်သလို ပီလည်း နားလည်မှာပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင် အတိတ်ကံအကြောင်းကို လက်ခံပီးသားလို့ပဲ ရိုးရိုးလေး ဆိုလိုတာပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ပြဌာန်းခံလားဆိုတာကိုတော့ ကိုယ့်ဘာသာပဲ သေချာ စဉ်းစားကြည့်စေချင် ပါတယ်။ ကံအကြောင်းတရားဆိုတာကို သေချာ လေ့လာဖတ်ရှုစေချင် ပါတယ်။ ပြီးရင် ကျမတို့ ပြည်သူတွေ တာဝန်ကျေပါလျက်နဲ့ အန်တီစုတို့ ကြိုးစားပါလျက်နဲ့ ဘာကြောင့် အမှန်တရားက ခုထိ အရေးနိမ့်နေပါသေးသလဲ...။ ပြီးတော့ လူထုက သူတို့ မလုပ်တဲ့ ဆိုးကျိုးဆက်..(ဥပမာ..နာဂစ်)ကို ခံစားရတာတွေ။ တကယ်တော့ yellowbreeze ဝေဖန်တဲ့ အချက်တွေက သိပ်ကျယ်ပြောပါတယ်။
ကဗျာဆိုတာခံစားမှုရဲ့ သရုပ်သကန်ပဲ လို့ ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်က ပြောခဲ့တယ်။ မြသီလာဟာ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ကဗျာပဲ။ မတို့ရက်မထိရက်တဲ့ ပန်းကလေး။ တစ်ခုပဲ….ဆုံးသွားမှာ ကြောက်မိတယ်။ ကျွန်တော့်ဘက်က ဒီလောက်ပါပဲ။ ….မေ့လို့….ဆရာစန်းဦး ကဗျာက မဂ္ဂဇင်း တခုခုထဲပါခဲ့တာထင်ရဲ့။ ကျွန်တော့်ဒိုင်ယာရီထဲလဲ ရှိနေတယ်။ ဆရာမကျန်းမာပါစေ။
မအားတာနဲ့ ခုမှ လာဖတ်နိုင်တယ်။ ပို့စ်ရော ကွန်မန့်တွေရော ဖတ်ပြီး အတော်မောသွားတယ်။
ကိုမောင်ရင်ပြောတာကို အပြည့်အ၀ လက်ခံပါတယ်။ ဆရာမရဲ့ ရိုးသား ပွင့်လင်းမှုကို ဒီပို့စ်မှာ အထင်းသား မြင်ရတာမို့ နာကြင်ရ၊ ပိုနားလည်ရတာပါပဲ။
သူလဲ ဒီလိုအဖြစ်မျိုး ဘယ်ကြုံချင်ပါ့မလဲ လို့ မိန်းမချင်း ကိုယ်ချင်းစာစိတ်လေးနဲ့ စဉ်းစားလိုက်ရင်ကို မကောင်းတဲ့ စကားတခွန်း လက်လွတ်စပယ်ပြောဖို့ အတော်ခက်ခဲမှာပါ။
တခါတလေကျတော့လဲ ဆရာမရေ..အတိတ်ကားလဲ အရိပ်များလို ပျောက်စေချင်ပါတယ်။
ဆရာမ ကို သိနေတဲ့ ဆရာမ က မသိတဲ့ ၉၅ ဘားအံ ပထ၀ီမေဂျာ က ကျောင်းသူတစ်ယောက်ပါ.. ရိုးသားစွာဝန်ခံရရင် ဆရာမရဲ့စာတွေကို ဒီနေ့ မှ စဖတ် ဖြစ်တယ်.. ဘားအံခရီး က စ ဖတ် ဖြစ်တာ စာရေး ဆရာမ လို .စသိကတည်းက လေးစားမိတာ. အဲဒီကာလတွေ မတိုင်ခင် ကတည်းက ဘယ်သူမှ မဖတ် တဲ့ကဗျာတွေ ရေး နေတာ. အစ အဆုံးဖတ်ပြီးမှ ကွန်မဲန် ပေးမလို့ ဘဲ.. ဒါပေမဲ့ဖတ်မိ ချိန်မှာ ဘဲ အခုဖြစ် နေသလို ခံစားမိလို့ (ဓါတ်ပုံတွေ မြင်တော့) အဲဒီ ကာလတွေ က သိပ္ပံ ဆရာမတွေရဲ.စကားတွေကြောင့် ၀ဇ္ဇာ ဆရာမ အနေနဲ့ကြေကွဲ ခဲ့ မှာဘဲ ဌာန မတူတဲ့ ပဋ္ဋိပက္ခ တွေ ကလည်း ရှိခဲ့ ကြတယ်လေ..အဲဒါ နဲ.ပတ်သက်ပြီး ဆရာမ တစ်ယောက်နဲ့စကားအခြေအတင် ဖြစ်ဘူးခဲ့တယ် ပညာတတ်တွေ ကလည်း အကျိုးမရှိ တဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်တတ်တာဘဲလား မေးမိ လို့ သူကလည်း ပြောပါတယ် ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်ဘဲ မစပ်စုနဲ့ တဲ့ ကိုယ်နဲ့ အရွယ်တူ မဟုတ်ဘဲ မဝေဖန် နဲ့ တဲ့...ကျမ က ၉၇ မှာ ထိုင်းကိုထွက်သွားတာ အိမ်ပြန်လာတိုင်း ဒေါ်ခင်စန်းဝေ ဆီ ရောက်တယ် ဒေါ်ခင်မျိုးသန့် ကိုတော့ခုထိ ရှာလို့ မတွေ့ ဘူး..ခု မလေးရှားမှာ ၂၀၀၀ခုနှစ်ကတည်းက ရောက်တာ.. မိုးမခ မှာ ဆရာမ အကြောင်းတွေ တွေ့ ရတော့ ဆရာမဘဲ ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပြီးသား ၂၀၀၉ ဇွန်မှာပြန်တော့ ဒေါ်ခင်စန်းဝေ နဲ့ ဆရာမ အကြောင်းပြောဖြစ်သေးတယ်...ရေးတေးတေး သိအောင်လို့ ပြောပြတာပါ..အချိန်တွေ လုသလိုဖြစ်သွားပြီ.. အတင်းတွေ အဖျင်းတွေနဲ. ပတ်သက်လို့ ကတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ဂရုစိုက်ရင်း ကမ္ဘာကျဉ်းတယ်လို့ဘဲပြောပါရစေ. ကိုယ့် အလုပ် ကိုယ် လုပ်ကြတာဘဲ လုပ်ကြရမှာဘဲလေ.. ကျမ က ၉၄..၉၅ လောက်က ဆရာမ မျက်စိ နောက်ခဲ့ မဲ့ GEC ရုံးခန်း မှာဝင်ထွက်နေခဲ့ တဲ့ ဓါတ်ပုံ စိုးမိုး ပါ....